आज नयाँ वर्ष, विभिन्न कार्यक्रमका साथ देशभर मनाइँदै जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
आज नयाँ वर्ष, विभिन्न कार्यक्रमका साथ देशभर मनाइँदै
१ बैशाख/जनबोली न्युज डेस्क, काठमाडौं । आज वि.सं. २०७२ साल बैशाख महिनाको पहिलो दिन अर्थात नयाँ वर्ष। आपसमा शुभकामना आदानप्रदान, भेटघाट, खानपीन र रमाइलो गरेर नयाँ वर्षको स्वागत गरिंदैछ । विक्रम संवतलाई आधार मानी हरेक वर्षको वैशाख १ गतेलाई नेपालमा नयाँ वर्षका रुपमा मनाउने प्रचलन छ ।
विक्रम संवत हिन्दू पञ्चांगमा आधारित नेपाल तथा भारतको राष्ट्रिय पात्रो हो, जुन प्राचीन हिन्दू परम्परा र वैदिक समय अंकनमा आधारित छ ।
याँ बर्षको सुरुवातको दिन रमाईलो गरे बर्ष भरि नै रमाईलो गर्न पाउने विश्वासका साथ आज विहानैदेखि विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा स्थानीयहरुको जमघट रहेको छ। प्राय सबैजना नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गर्न मोवाइल, अनलाईनको सहायता लिइरहेका छन्।
यसैगरि अहिलेको सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक सञजाल फेसबुक, ट्वीटर लगायत साईटहरु नयाँ बर्षको शुभकामनाले भरिएका छन। प्राय सवैले पुरानो बर्ष जस्तो रहेपनि नयाँ बर्ष खुसी उल्लासका साथ वितोस भन्ने शुभकामनाका स्टाटसहरु लेखिएका छन्।
विक्रम संवत अंग्रेजी पात्रोभन्दा झण्डै ५६ वर्ष ८ महिना १५ दिन अगाडि छ । सूर्यसँग सम्बन्धित भएकाले यसमा ग्रह नक्षत्रका नाम पनि महिनासँग सम्बन्धित छन ।
पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले विसं शास्त्रसम्मत संवत्सर रहेको जानकारी गराउँदै यसैका आधारमा वैशाख १ गतेलाई नयाँ वर्षका रुपमा लिने गरिएको बताए । विसंलाई विक्रमादित्य राजाले चलाएको संवत् भन्ने किंवदन्ती छ ।
ज्योतीषीय दृष्टिबाट २०७१ सालभन्दा २०७२ साल देशका लागि राम्रो हुने देखिएको गौतमको भनाइ छ । वर्षको शुभाशुभमा ग्रहको प्रभाव प्रत्यक्ष पर्ने र २०७१ सालमा चन्द्रमा राजा र मन्त्री दुवैको भूमिकामा रहेका कारण देश अस्थिरतामा रुमल्लिएको उनले बताए ।
“ विसं २०७२मा शनि ग्रह राजाको भूमिकामा र मङ्गल ग्रह मन्त्रीको भूमिकामा रहेका कारण अघिल्लो वर्षभन्दा नयाँ वर्ष राम्रो हुने देखिन्छ, अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा यस वर्ष गत वर्षभन्दा खाद्यान्नको राम्रो उब्जाउ, वर्षात हुने आदिको राम्रो सम्भावना देखिन्छ”– उनले भने ।
नयाँ वर्षमा विभिन्न नयाँ काम सुरु गर्ने, एकापसमा शुभकामना आदान गर्ने, वर्ष शुभ रहोस भनी विभिन्न शक्तिपीठमा दर्शन गर्न जाने प्रचलन छ ।